testosterone Cypionate တစ်ခု In-depth ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/testosterone Cypionate တစ်ခု In-depth ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
အပေါ် Posted 11 / 19 / 2018 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
စတီရွိုက်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်သူတို့ကိုသုံးပြီး In-အရာနှင့်လူတိုင်းဖြစ်လာကြပါပြီတဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျသငျသညျ testosterone Cypionate အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အဘို့အလိုအလည်းမရှိ။ ကျနော်တို့ testosterone Cypionate အခြားသူတွေအကြားသုံးသပ်ပြီး testosterone အလွန်အကျွံသုံးစွဲနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ testosterone ထိုးသွင်းဖို့ဘယ်လို, testosterone သောက်သုံးသောကနေအထိဒီ Steroid တစ်မျိုးနှင့် ပတ်သက်. အများအပြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ပြုတယ်မြှတို့ကိုအကြှနျုပျတို့ testosterone Cypionate ၏ဤလောကသို့ get အဖြစ်ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖို့အကောင်းဆုံး site ကိုသိချင်ပါသလား testosterone Cypionate အွန်လိုင်းဝယ်ဖို့e? AASraw.com အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတရုတ်-based ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုကြောင်းလုပ်ငန်း, စျေးကွက်နှင့် testosterone Cypionate အပါအဝင်တက်ကြွဆေးဝါးအလယ်အလတ်နှင့်ထုတ်ကုန်များဖြန့်ဖြူးဖြစ်ကြသည်။
ဒီတော့ testosterone ဟော်မုန်း cypionate ကဘာလဲ?
testosterone ဈေးကွက်ထဲမှာဖန်တီးခံရဖို့ပထမဦးဆုံးခဲ့သည့်ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, testosterone Cypionate ဖြည်းဖြည်းပြုမူတဲ့ testosterone ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုရှည်လျားသော-Ester နှင့်ရေနံ-based ထိုးဆေးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအမျိုးသားများတွင်အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်သောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ testosterone တစ်ချို့တဲ့ဖြစ်သော hypogonadism ကုသရန်အသုံးပြုသည်။
ဆေးသမားအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင်မည်သို့ပြောသည်ပြီးနောက်ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဖြစ်ခြင်း, သင်သည်သင်၏အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ကပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ။ ကံကောင်းတာကက Self-ထိုးဆေးဖြစ်ပါသည်, ဤသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူစေသည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ယေဘုယျပုံစံတှငျလညျးရယူနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
testosterone ပထမဦးဆုံးအ 1935 အတွက်ထုတ်လုပ်သောနှင့်နှစ်နှစ်အကြာတွင်ကြောင့်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ပထမတော့သူကလုံးလေးများ form မှာမရရှိနိုင်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ testosterone Cypionate အဖြစ်အသားထိုးဆေးဖြစ်သော Ester ၏ပုံစံဖြစ်ခဲ့သည်။
Methyltestosterone, ဖန်တီးခံရဖို့ပထမဦးဆုံးဟိုစတီရွိုက်၏တဦးတည်း 1935 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, က hepatotoxicity နှင့်အတူဆက်နွယ်နေ, ဤကြောင့်ခဲ့တာကြောင့်ပေါရာဏဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကြာကြာ-သရုပ်ဆောင် testosterone ဟော်မုန်း Ester testosterone Cypionate Upjohn လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီအားဖြင့်နှစ်လယ်ပိုင်း 1950s အတွက်စျေးကွက်အတွင်းစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ မူလကက Depo-testosterone အမည်အောက်တွင်ရောင်းချခဲ့သည်ဆဲအမည်တူနှင့်အတူရေပန်းစားသည်။
Upjohn သည် Depo-Testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်မှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ကဖြစ်သည်။ Testosterone ဟော်မုန်းကို Testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးသည် Testbuildone enanthate ကိုအားကစားသမားများနှင့်အားကစားသမားများကနှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့နှစ်ခုဟာဆင်တူပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဘဝတစ် ၀ က်ကတော့မတူပါဘူး။
testosterone Cypionate အဆိုပါ 1970s အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့အတည်ပြုချက်တယ်သောဟိုစတီရွိုက်အကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်သာ testosterone အစားထိုးကုထုံးများတွင်အသုံးပြုရမည့် FDA ကများကသတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးအသုံးပြုရန်မသင့်တော်တဲ့အတွက်နှစ်တွေက၎င်း၏အသုံးပြုမှုစဲခဲ့သည်။ တစ်ဦး 200mg အပတ်စဉ်ထိုးမှာယူသည့်အခါ testosterone cypionate အထီးကလေးမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ကူးမြောက်ခဲ့သည်။
အတှကျအသုံးပွု testosterone ဟော်မုန်း cypionate ကဘာလဲ?
testosterone Cypionate ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်အသုံးပြုမှုများစွာရှိသည်။ ဤတွင် application များဖြစ်သည်။
အဆိုပါကြံ့ခိုင်ရေးကမ်ဘာပျေါတှငျတစျခုကအကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်ကြိုးစားကြဖို့အမြဲရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအလေးမတစ်ခုသို့မဟုတ်အားကစားသမားများများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, သငျသညျကြိမ်ယှဉ်ပြိုင်မှာပြင်းစွာသောအဖြစ်နိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ အနိုင်ရတဲ့နှင့်တကွကြွလာသော Self-စိတ်ကျေနပ်မှုထက်အခြားတစ်တံဆိပ်ချီးမြှင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအတွက်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးလုံခြုံရေးအများအပြားများအတွက်အများဆုံးမှာပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သည်ခံရ။ သင်၏အသက်တာတွင်ထိုကဲ့သို့သောအောင်မြင်မှုရယူခြင်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် မူတည်. ပိုပြီးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုယူသို့မဟုတ်နိုင်ဘူး။ သို့သော်ကောင်းမွန်သောသတင်း testosterone Cypionate ကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးသင်သည်သင်၏ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်များပြီးမြောက်စေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ဒီအဆေးဝါးကြံ့ခိုင်ရေးဂုရုဒါနှစ်သက်ပါသလဲ သူတို့ကကြွက်သားတွေပိုကြီးအောင်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာသင်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်ကြောင်းကြွက်သားပျက်စီးမှုပမာဏကိုလျော့ကျလာကခက်ခဲလေ့ကျင့်ခန်းကနေအလျင်အမြန် recover စေသည်။ ဒီအားသာချက်အားကစားသမားခက်ခဲလေ့ကျင့်နှင့်မှန်မှန် overtraining မပါဘဲနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
testosterone Cypionate ကြွက်သားအရည်အသွေးနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကူညီပေးသည်။ ဒါဟာအစအရိုးအစှမျးသတ်တိနှငျ့သိပ်သည်းဆထိန်းသိမ်း။ အခြားအကြီးအရာကဒီမူးယစ်ဆေးဝါးကသင်၏လေ့ကျင့်ခန်းတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဝါဒီများကိုစွမ်းအားများပါလိမ့်မယ်ကတည်းကသင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများအဘို့အစဉ်အမြဲတောင့်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
testosterone Cypionate ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှု၏တိုးတက်မှုမှတစ်ဆင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုကိုအားပေးအားမြှောက်။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးအဆီ၏ပျက်ပြားမှုနှင့်အသစ်အဆီဆဲလ်များဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးအလွယ်တကူဤအရပ်ပုအန်ဒရိုဂျင် receptor မှ binding အားဖြင့်ဤသို့ပြုနိုင်စွမ်းသည်။
Testosterone ဟော်မုန်းကို Cydrionate androgen အစားထိုးကုသမှုတွင်အသုံးပြုသည်။ လောလောဆယ်, သူကဝယ်ယူသို့မဟုတ်မွေးရာပါဖြစ်စေ hypogonadotropic နှင့်မူလတန်း hypogonadism ၏ကုသမှုများအတွက် FDA ကအတည်ပြုသည်။ ဤအခြေအနေသည်ယောက်ျားများသည် Testosterone ဟော်မုန်းကိုလုံလောက်စွာမထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ရောဂါဖြစ်သည်။ နှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ
Hypogonadotropic သည့်အခါ testosterone ဟော်မုန်းပျက်စီးရရှိထုတ်လုပ်ရန်သည့်အခါအပေါ်ဝှေးနှင့်အတူဆက်သွယ်သောဦးနှောက် (pituitary gland ဒါမှမဟုတ် hypothalamus) ၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများဒါဟာရာအရပ်ကိုကြာ hypogonadism- ။
မူလတန်းအဆိုပါဝှေးလုံလောက်သော testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခါဖြစ်ပျက် hypogonadism- ။
တစ်ဦးသောသူခြင်းကိုသည်းခံဒီကနေခံစားနေရပြီးသောအခါ, အနိမ့်လိင် drive ကို, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ပြဿနာများကိုတစ်ဦးစိုက်ထူရတဲ့နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း), ဆင်းရဲသားကိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ခံစားချက်အပြောင်းအလဲများကို။ ဒါဟာအစ, သွေးအားနည်းရောဂါမှကြွက်သားထုထည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်, gynecomastia (ရင်သားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး) နှင့်ဝှေးနှင့်လိင်တံနှစ်ဦးစလုံး၏လျှော့ချတိုးတက်မှု၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ သို့သော်အမျိုးသားများတွင်နှောင်းပိုင်းတွင်-စတင်ခြင်း hypogonadism ကုသ၎င်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိသေးပါကိုအတည်မပြုရသေး။
ဒါကြောင့်လိင်ယောက်ျားအတွက်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံး, အရိုးပွရောဂါကုသရန်အသုံးပြုသည်ထို့အပြင်, oligospermia (ကနိမ့်သုက်ပိုးအရေအတွက်ရှိခြင်း), အထီးအပျိုဖော်ဝင်စ, ရင်သားပုံမမှန်ခြင်း, ရင်သားကင်ဆာနှောင့်နှေး။
ဘယ်လို testosterone ဟော်မုန်း cypionate အလုပ်လုပ်ပါသလဲ
testosterone Cypionate ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါ၏တိုးတက်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သော endogenous အန်ဒရိုဂျင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစအလယ်တန်းလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အထောက်အကူ။ သူတို့ကအဆီဖြန့်ဖြူးခြင်း, ခန္ဓာကိုယ် musculature အတွက်အပြောင်းအလဲအသံကြိုး thickened, laryngeal ပျတိုးနှင့်ဆီးကျိတ်ကြီးထွားမှုနှင့်ရငျ့ပါဝင်သည်။
ဒါဟာမူးယစ်ဆေး testosterone ကဲ့သို့တူညီသောဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားသာချက်ကပိုရှည်ဝက်ဘဝနှင့်ဖြန့်ချိမှုနှုန်းရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေး 24 နာရီအတွင်းပြုလုပ်အထိ 400% အားဖြင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါအန်ဒရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်က၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်လာမည့်သုံးမှငါးရက်ကြာမြင့်မားတဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အသားအုပ်ချုပ်မှုရှိပြီးတာနဲ့ကလိင်စိတ်နှင့်ခံစားချက်အတွက်ဒေသခံရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတက်အကျဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
testosterone Cypionate နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအခြို့သော estrogen receptor ၏ activation အောက်ပါ estradiol မှပြောင်းလဲခြင်းအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာအစအန်ဒရိုဂျင် receptor activation မှတဆင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒါဟာထိုသို့အဆီဖို့အလွန်အမင်းပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခု esterified ဟိုဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ပေးထားသည့်အခါသူတို့ကအသည်းအားဖြင့်လျင်မြန်စွာ inactivated နေကြသည်ကတည်းက testosterone နှင့်၎င်း၏ Ester အနေနဲ့ဆေးထိုးမှတဆင့်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါမည်။
ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏သွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်ရေးလည်းမရှိပြီးတာနဲ့ဖြန့်ဖြူး၎င်း၏အသံအတိုးအကျယ် 1 L / ကီလိုဂရမ်န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
စုပ်ယူရာအရပ်ကိုကြာသောအခါ, မူးယစ်ဆေးလုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်သို့ရရှိသွားတဲ့။ ထိုသို့ 40% န့်အသတ်ကျန်ကြွင်းသောသို့မဟုတ် albumin အပါအဝင်အခြားပရိုတိန်းတွဲနေစဉ်ပြုပြင်မွမ်းမံပေါ်၌က 2% ကိုပလာစမာ globulin မှချည်နှောင်။
အလုပ်လုပ်စတင်ရန်ဒီမူးယစ်ဆေးသည်အင်ဇိုင်းတွေအားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါဓာတ်ကူပစ္စည်း၏လုပျငနျး testosterone နဲ့ဒီမော်လီကျူး၏ Ester အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအကြားနှောင်ကြိုးကိုချိုးဖျက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ testosterone Cypionate ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ Ester ၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားတစ်ဦးမဟုတ်တော့အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါခွဲခြာဖြစ်ပေါ်ပြီးတာနဲ့ testosterone ဟော်မုန်း 17 ketosteroids သို့ဆင်းကျိုးသည်။ ဒါဟာလမ်းကြောင်းမတူပဲနှစ်ခုမှတစ်ဆင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ Dihydrotestosterone နှင့် estradiol မူလတန်းတက်ကြွ metabolites ဖြစ်ကြသည်။ testosterone အဆိုပါ urogenital ကျေးရွာအုပ်စု, အသည်းနှင့်အရေပြားအတွက် DHT သို့ဆင်းကျိုးသည်။ Dihydrotestosterone နောက်ထပ် androstanediol သို့ဆင်းကျိုးသည်။
intramuscularly ပေးသော testosterone ဟော်မုန်းထိုး၏ 90% glucuronic, testosterone ဟော်မုန်းရဲ့ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် conjugation နှင့်၎င်း၏ metabolites ၏ပုံစံအတွက်ဆီးထဲမှာဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။6ဝန်းကျင်ကျန်ရှိ testosterone ဟော်မုန်း၏% ကို unconjugated form မှာလေ့မစင်မှတဆင့်ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဲဒီအကြောင်းရှစ်ရက်ကတည်းကအဆိုပါ testosterone Cypionate ဝက်ဘဝအရှည်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
testosterone ဟော်မုန်း cypionate များအတွက်မီးမောင်းထိုးပြထားသည်
testosterone Cypionate ယောက်ျားအတွက် hypogonadism ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ဤအခြေအနေမှလုံလောက်သောလိင်ဟော်မုန်း testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းတို့ကဆောင်သည်။
testosterone Cypionate ထိုးဆေးကြောင်းအဖြေတစ်ခု၏ပုံစံအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကြွက်သားအတွက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါမည်, ထိုသို့အကြောင်းကိုအများဆုံးအဆင်ပြေအရာသင်သည်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်အတူကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်းပြီးနောက်သင့်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပျနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
testosterone Cypionate ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုယေဘုယျမူးယစ်ဆေးများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အားမူးယစ်ဆေးနှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Depo-testosterone ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကာယဗလများအတွက် testosterone ဟော်မုန်း cypionate ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
testosterone Cypionate ကိုအသုံးပြုထားပြီးသူမည်သူမဆိုကခန္ဓာကိုယ်မှပေးစိတ်ကူးရလဒ်များကိုထေူနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏အာဏာကိုကဈေးကွက်ထဲမှာထိပ်စတီရွိုက်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ထို့အပြင်သူကအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အထင်ကြီးရလဒ်များကိုပေးထားပါတယ်။
ဒါဟာဂြိုဟ်တုဆဲလ် function ကိုပြုစုပျိုးထောင်အားဖြင့်ကြွက်သားအစာရှောင်ခြင်းပြုပြင်ရေး။
နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုတဆင့်သင်အကြီးအကျယ်ကြွက်သားအမြတ်ပေးသည်။
testosterone Cypionate လည်းသင်၏အစွမ်းသတ္တိတိုးပွားစေပါသည်။
ဒါ့အပြင် testosterone တစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်စဉ်အတွင်းကြွက်သားများဆုံးရှုံးမှုသွေးဆောင်နိုင်သောအခြားဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကာကွယ်ပေးသည်။
testosterone ဟော်မုန်း cypionate များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
အံ့သြစရာကဒီဆေးကိုထိနမိဒ္ဓဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ အဖြစ်အများကြီးသင် testosterone Cypionate ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်ဆင်းရဲခံရစေခြင်းငှါသကဲ့သို့, ကောင်းသောသတင်းကိုသူတို့စီမံခန့်ခွဲဖြစ်ပါတယ်။
testosterone Cypionate ၏ Acne- အသုံးပြုမှုဝက်ခြံဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာပြဿနာဖြစ်နိုင်သည်, သင်မူကားထိရောက်သောကုသမှုရရှိနိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခစျြလိမျ့မညျ။ ထိုကဲ့သို့သော glycolic acid ကို, benzoyl ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် salicylic acid အဖြစ်လိမ်းကုသမှုဝက်ခြံအလယ်အလတ်မှအပျော့စား၏ကုသမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးတော်ပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည်လည်းရှင်းလင်းအသားအရေရရှိရန်ကောင်းသောမျက်နှာသန့်ရှင်းရေးနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သင့်ပါသည်။
ဆံပင်ဒီဆေးဝါးအများဆုံးမျှော်လင့်မထားတဲ့ဒေသများရှိဆံပင်များကြီးထွားစေနိုင်ပါသည် growth- ။ သင်တစ်ဦးအလွန်အကျွံခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်မျက်နှာဆံပင်ရှိခြင်းထံမှခံရလျှင်, သင်ကြောင်းလျော့ချစေခြင်းငှါအချို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လျှပ်စစ်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်တစ်ခုသို့မဟုတ်သင်တုန်းသုံးပြီးရိတ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီရိတ်မကြာခဏသင်သည်သင်တုန်းပူလောင်ပေးသည်ဆိုပါက, သင်ကပြော့မုန့်ဝယ်ယူထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။
သင်တို့သည်လည်းအမြစ်ကနေဆံပင်ဆွတ်ဖို့ချည်သို့မဟုတ် tweeze လိမ့်မည်။ ရက်အမြစ်ကနေဆံပင်ဖယ်ရှားပစ်တဲ့နောက်ထပ်အမြန်လမ်းဖြစ်၏။ depilatories အဖြစ်လူသိများခိုင်မာတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုကိုသင်အများကြီးကူညီနိုင်ပေမယ့်သင်တို့ကိုအထိခိုက်မခံအသားအရေရှိပါက, သင်ပထမဦးဆုံးသေးငယ်တဲ့အစက်အပြောက်ပေါ်မှာစမ်းသပ်သင့်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံဆံပင်တန်ပြန်၏အခြားနည်းလမ်းဆေး, လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေးနှင့်လျှပ်စစ်သုံး၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်ရှိပါတယ်။
သင်နာကျင်မှုခံစားခဲ့ရဒါမှမဟုတ်ဆေးထိုးနေရာတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းင့်လို့စိတျပူပရရန်မလိုပါ site- ထိုးမှာရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှု။ သငျသညျရှေ့တျော၌ရိုက်ချက်ဖူးလျှင်သင်ပြီးသားကတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလျှင်နာကျင်ခြင်းပုံမှန်ကြောင်းပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒီလျှော့ချဖို့, သင်ထိုးသွင်းဧရိယာကိုရွှေ့ကြောင်းအာမခံပါသည်။ သငျသညျမလှုပ်တည်လျှင်, ထိုဒေသတွင်ပိုပြီးစိတ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲလုပ်, သင်နာကျင်မှုနဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတူကူညီပေးဖို့အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကိုယူပြီးစဉ်းစားပါလိမ့်မည်။ ဒီကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှနောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းတစ်ခုပိတ်ထိုးခံခဲ့ရသောဧရိယာပေါ်တစ်ပူနွေး pack ကိုလှည့်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျနာကျင်မှုသို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်း 48 နာရီအတွင်းကျွံသွားမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိထားမိတစ်ချိန်ကသင်, သို့သော်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အာရုံကိုရှာခြင်းငှါသင့်ပါတယ်။
Gynecomastia (ရင်ပတ်၏ပျတိုး) -You သင့်ရဲ့ရင်သားကဒီဆေးကိုသုံးပြီးပြီးနောက်ကြီးမားသောဖြစ်လာကြောင်းသတိထားမိပေမည်။ ဒါကအများကြီးသင်မစိုးရိမ်သင့်သည်, အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုနေရာလေးကိုအတွက်လာကြလိမ့်မည်။ ပထမဦးဆုံးချုံ့ရှပ်အင်္ကျီကို အသုံးပြု. ဖြစ်ပါတယ်။ ကပိုက်ဆံအိတ်ပေါ်လွယ်ကူသည်နှင့်ထိရောက်စွာရင်ပတ်၏အသွင်အပြင်ကိုလျော့နည်းစေကတည်းကဒါဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလညျး, dumbbell ယိမ်းယိုင်စာနယ်ဇင်းနှင့်ထိုင်အတန်း-ups တွန်း, High-ပြင်းထန်မှုကြားကာလသင်တန်း (HIIT) ကဲ့သို့သောအချို့သော gynecomastia လေ့ကျင့်ခန်းကြိုးစားကြည့်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါရောင်ရမ်းရင်သား၏အသွင်အပြင်ကိုလျှော့ချရန်, သငျသညျကြွက်သားတည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲကွိုးစားသငျ့။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ရင်သားလျော့နည်းသိသာပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ အဆီရောင်ရမ်းခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်သောကြောင့်, သင်ဖက်တီးအစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်သီး, leafy အစိမ်းရောင်, ဖက်တီးငါးနှင့်ချိုမြိန်အာလူးနှင့်တူကျန်းမာဆီလောင်သင့်ပါတယ်။ gynecomastia တားဆီးရန်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းသည်ရင်ပတ်ကိုဧရိယာထဲမှာအဆီဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ခွဲစိတ်မှုခံယူဖို့ပါပဲ။
စိုက်ထူထားရှိခြင်းကိုပိုမိုပုံမှန်အစည်းအဝေး erections- ပုံမှန်ပေမယ်မလိုချင်တဲ့သူမြားရှိခြင်းနည်းနည်းကြီးကျယ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ testosterone Cypionate သုံးပြီးထံမှသင်တို့ကိုရပ်တန့်မပေးသင့်ပါတယ်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့လမ်းလာဆိုပုံမှန်မဟုတ်သောစိုက်ထူကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ယခုအားဖြင့်သင်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြသည်။ ကဖြစ်ပျက်ပြီးတာနဲ့သင်ကလောကီသားတို့သည်သင်တို့အပေါ်ကိုနှိမ်နင်းနေသည်နှင့်တူခံစားရရန်မလိုပါ, ဖြည်းဖြည်းထွက်သက်တော်သည်ထိုင်ပြီးအေးဆေးနေကြဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာနှင့်တကွကြွလာသောအရှက်လျှော့ချဖို့, သင်ကလက်ပ်တော့, ရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ဂျာကင်အင်္ကျီကို အသုံးပြု. စိုက်ထူကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ ဖဲ့ခြွေဖို့မလိုအပ်, လူတိုင်းကဒီတွေ့ကြုံနှင့်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်သူမှသင်တဦးတည်းရှိခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ သငျသညျလညျး, ဆငျခွငျကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြိုးစားအာရုံ, အအေးမိရေချိုးခန်းယူ, တစ်ဦးနွေးရေချိုးရှိသည်သို့မဟုတ်ရွရွပြေးနဲ့တူနူးညံ့သိမ်မွေ့လေ့ကျင့်ခန်းများနိုင်ဘူး။ ဒါဟာသို့သော်စိုက်ထူနာကျင်လျှင်, သင်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အာရုံကိုရှာခြင်းငှါသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
မပိုဖြစ်ပါတယ်လေးနာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြာကြောင်းတစ်ခုစိုက်ထူ usual- ထက်ပိုရှည်များအတွက်နေထိုင်ကြောင်းစိုက်ထူ။ testosterone Cypionate ဒီဖြစ်ပေါ်စေစေခြင်းငှါ, သင်ဧရိယာပေါ်ရေခဲထုပ်အားမရဖွငျ့ဤအတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ ဤအတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့စိုက်ထူတစ်မိနစ်အတွင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကဆရာဝန်လည်းသူကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်သင့်အားဆေးပြားသို့မဟုတ်ဆေးထိုးပေးလိမ့်မည်။
တစ်ဦးက headache- တစ်ဦးကခေါင်းကိုက် testosterone Cypionate ၏အသုံးပြုမှုကိုကယူဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအလုပ်လုပ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်သည်သင်၏ခေါင်းကိုနာကျင်ကိုက်ခဲနဲ့စကားလက်ဆုံမောင်းသို့မဟုတ်သယ်ဆောင်သော်လည်းသင်အိပ်ရာထဲမှာနေဖို့ထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သွားကြဖို့စောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်ပေလိမ့်မည်။ သငျသညျ Aspirin, naproxen, Ibuprofen, နှင့် acetaminophen ကဲ့သို့အ over-the-counter အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကိုယူပြီးကြိုးစားကြည့်နိုင်ဘူး။ သင်တို့သည်လည်းနာကျင်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှအောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။ သင်၏မျက်စိပိတ်ပြီးအနားယူယူပါ။ သင်တို့သည်လည်းသင်တို့ဘုံဗိမာန်နှင့်သင့်လည်ပင်း massage နိုင်ဘူး။ ဒါဟာသင်အနားယူနှင့်လည်းဦးခေါင်းခွံနှင့်လည်ပင်းဧရိယာ၏ခြေရင်းပတ်လည်နွေးအထည်တစ်ခုသို့မဟုတ်အပူ pad ပါအားမရကြိုးစားသောကိုလည်းအကြံပြုလိုတယ်။ နာကျင်မှုရှိနေသေးလျှင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာကြလော့။
ခံစားချက်တစ်ခါတစ်ရံသင်ကတခြားရက်ပေါင်းပေါ်တွင်သင်၏တယောက်တည်းနေနေ့ကနေစဉ်အတွင်းဖြုန်းချင်တူ, သငျသညျအလှနျခံစားရပေမည်ခံစားရပေမည် swings- ။ ဒါဟာနေသမျှကာလပတ်လုံးကသင့်ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများမထိခိုက်ပါဘူးအဖြစ်ပုံမှန်ပါပဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အစွန်းရောက်စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများကိုတစ်ခုခုမဖြောင့်သောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ testosterone ဒီဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်မလျှင်, နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လျှပ်တပြက်ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မည်။ သင်မှန်မှန်လေ့ကျင့်ခန်းလျှင်, သင်ကလုပ်နေတာချက်ချင်းနီးပါးသင့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေအမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာသောအစားအစာကိုစားခြင်းသာသင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနျြးမာရေးအတှကျအရေးပါဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လည်းသင့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးမှာအသုံးဝင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းဘာဝနာနှင့်ယောဂနဲ့တူအလေ့အထများအေးဆေးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခြင်းအားဖြင့်အပန်းဖြေလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့စိတျအပွောငျးအလဲသင်၏အသက်တာကိုကျော်ယူပြီးနေကြသည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရလျှင်ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးပမာဏမြင့်မားစွာသောက်သုံးပါကအမျိုးသား၏သုက်ပိုးအရေအတွက်လျော့ကျသွားခြင်း - အကယ်၍ သင်သည် Testosterone Cypionate ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သင့်အဖော်အားကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်ပြhavingနာများရှိပါက၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်ဟော်မုန်းကုသမှုနှင့်ဆေးဝါးများခံယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်ကူညီနိုင်သည့်မျိုးပွားနိုင်သောနည်းပညာ (အေတီတီ) ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကုသမှုများသည်အချည်းနှီးသာဖြစ်ပုံရလျှင်မျိုးပွားရန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည့်အခါသင်လိင်ဆက်ဆံသည့်အကြိမ်အရေအတွက်သို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သုက်ပိုးမ ၀ င်မှုကိုတားဆီးနိုင်သောချောဆီကိုရှောင်ခြင်းသည်၎င်းကိုစီမံရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဤအရာအလုံးစုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပျော့စားလျှင်သူတို့အချို့ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။ ကဖြစ်ပျက်မပါဘူးဆိုရင်, သင့်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ပြောဆိုပါ။
ဤရွေ့ကားအလေးအနက်ထားသင့်ကြောင်းအဆိုပါပြင်းထန်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤရောဂါလက္ခဏာတွေမဆိုသတိထားမိပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ခေါ်ပါ။ ရောဂါအသက်အန္တရာယ်များမှာကဲ့သို့အသငျတို့သသူတို့တစ်တွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းထင်လျှင်သင်ခံစားရတစ်ချိန်ကချက်ချင်းအကူအညီကိုမေးပါ။ ဤတွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်သင်တို့အဘို့အထွက်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်;
နှလုံးသင်အောက်ပါပြီသတိထားမိနိုင်, သင်တဦးတည်းအနေဖြင့်ခံစားနေရသည်ဟုကိုသိရန် attack-; သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်း, တိုတောင်းထွက်သက်တော်သည်နှင့်ရင်ဘတ်နာကျင်မှုအတွက်အဆင်မပြေ။
ဆီးကျိတ်ဂလင်းအရွယ်အစားကိုတိုးပှား။ ဒါဟာအားဖြင့် symptomized လျက်ရှိ၏ ဆီးအိမ်သွန်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, သငျသညျဆီးချင်နေစဉ်အားနည်းဆီးစီးသို့မဟုတ် peeing စတင် sops နှင့်ပြန်လည်စတင်သည်နှင့်ဒုက္ခတစ်ခုရှိခြင်း, အချုပ်ခန်း။ အခြားသောနိမိတ်လက္ခဏာ nocturia (ညအချိန်တွင်ပိုပြီးဆီး၏ခံစားချက်) နှင့်ဆီးရန်အရေးပေါ်နှင့်မကြာခဏလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Stroke- တစ်ဦးကမိန့်ခွန်းက symptomize နှင့်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲကတစ်ခုဘက်မှာအားနည်းခံစားစေခြင်းငှါ slurred ။
သင့်ရဲ့ဆရာဝန် cancer- ဆီးကျိတ်သငျသညျခွောကျဆယျငါးနှစျသို့မဟုတ်အထက်များမှာအထူးသဖြင့်လျှင် testosterone Cypionate နှင့်အတူကုသမှုမီနှင့်စဉ်အတွင်းမည်သည့်ဆီးကျိတ်ဂလင်းပြဿနာများ၏စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အသည်းဒါဟာမှောင်မိုက်-အရောင်ဆီး, အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံး, ပုံမှန်မဟုတ်သောမောပန်းခြင်း, ဖျော့အရောင်မစင်အလွယ်တကူပုံမှန်အတိုင်းနှင့်ခြေဆစ်များနှင့်ခြေထောက်ရောင်ရမ်းခြင်းထက်အမည်းရတဲ့ရှိခြင်း, မျက်စိဒါမှမဟုတ်အရေပြားအဝါရောင်ခြင်းဖြင့် symptomized နိုင် problems- ။ သင်တို့သည်လည်းအစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှု, အန်ခြင်းနှင့်ပျို့ချင်တွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။
Polycythemia- ဤသွေးနီဆဲလ်အရေအတွက်ထဲမှာမြင့်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အရိပ်လက္ခဏာဟူမူကား, စိတ်ရွှင်လန်းအတွက်ကျဆင်းခြင်း, မောပန်းခြင်း, သွေးခဲ, လေဖြတ်ခြင်း, စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ, ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်မျက်နှာလာခြင်း။
ဒီ embolism- အဆုတ်အဆုတ်ထဲမှာသွေးခဲ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အရိပ်လက္ခဏာကိုသင်အသက်ရှုအသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းနှင့်ရင်ကြပ်ယူတစ်ချိန်ကတန်ဖိုးရှိရရှိသွားတဲ့ကြောင့်ခေါင်းမူးသို့မဟုတ် lightheaded, နေခြင်းဖြင့်သတိလစ်, ရင်ဘတ်အဆင်မပြေသို့မဟုတ်နာကျင်မှုခံစား, အစာရှောင်ခြင်းသွေးခုန်နှုန်းသည်အသွေးအထဲကချောင်းဆိုးနေကြတယ်။
သင့်ရဲ့ခြေထောက် '' နက်ရှိုင်းသောသွေးပြန်ကြောအတွင်းသွေးခဲမှု၏ဖွဲ့စည်းခြင်း thrombosis- နက်ရှိုင်းသောသွေးကြောသင့်ရဲ့ခြေထောက်၏နာကျင်မှုနဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းအားဖြင့် symptomized ဖြစ်ပါတယ်။
testosterone ဟော်မုန်း cypionate ၏သောက်သုံးသော
Testosterone ဟော်မုန်းပမာဏသည်အချို့သောအချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအရာများသည်;
ပထမဦးဆုံးကတော့ယေဘုယျပုံစံဖြစ်ခြင်း testosterone Cypionate နှစ်ခုပုံစံများရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ml ကို 100mg / နှင့် 200mg / ml ၏ခွန်အားနှင့်အတူတစ်ထိုးဆေးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယထိုးဆေးပုံစံလည်းဖြစ်သည့်အမှတ်တံဆိပ် Depo-testosterone ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ml ကို 100mg / နှင့် 200mg / ml အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
မူလတန်း hypogonadism များအတွက်သောက်သုံးသော
ပုံမှန်စတင်သောက်သုံးသော-အဆိုပါဆရာဝန်ညွှန်ကြားမည်ကိုသောက်သုံးသောသင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုနှင့်အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးဆေးသမားသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သောသောက်သုံးသောကိုသိနိုငျသညျ။ သူသို့မဟုတ်သူမတိုင်း 50-400 ပတ် 2-4 မီလီဂရမ်တစ်သောက်သုံးသောသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
သင်က testosterone ဟော်မုန်းအသှေးကိုအဆင့်ဆင့်နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ကုသမှုရန်သင့်တုံ့ပြန်မှုပေါ်မူတည်နေတဲ့သောက်သုံးသောတိုးရှိသည်ဖို့သင့်ဆရာဝန်များကအကြံပေးစေခြင်းငှါ increases- သောက်သုံးသော။
ဒီဆေးကိုအများဆုံးသောက်သုံးသော 400 ကြွက်သားသို့တိုင်းနှစ်ပတ်ဆေးထိုး mg ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးသူငယ်သောက်သုံးသော (12-17 နှစ်)
ပုံမှန်စတင်သင့်ဆရာဝန်သူ / သူမ၏ရောဂါနှင့်အသက်အရွယ်ပေါ် မူတည်. သင့်ကလေး၏သောက်သုံးသောဖော်ပြရန်လိမ့်မယ် dosage- ။ သူကသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်တစ်ဦးဆေးညွှန်းကိုငါပေးမည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူတိုင်းနှစ်ခုမှလေးပတ်က၌သင်တို့၏အနည်းငယ်သာတဦးတည်းရဲ့ကြွက်သားသို့ 50-400 မီလီဂရမ်ဆေးထိုးတဲ့သောက်သုံးသောအကြံပြုလိမ့်မည်။
အဆိုပါဆရာဝန် increase- သောက်သုံးသော၎င်းတို့၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ကုသမှုနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအသှေးကိုအဆင့်ဆင့်တုံ့ပြန်ပေါ် မူတည်. သင့်ကလေး၏သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
သင့်ကလေး၏ကြွက်သားထဲသို့ထိုးသွင်းရန်အများဆုံးသောက်သုံးသောပမာဏသည်နှစ်ပတ်လျှင် 400 mg ဖြစ်သည်။
ကလေးသူငယ်သောက်သုံးသော (0-11 နှစ်)
hypogonadotropic hypogonadism ၏ကုသမှုများအတွက်သောက်သုံးသော
အရွယ်ရောက်ပြီးသူသောက်သုံးသော (အထကျ 18 နှစ်နှင့်)
သင့်ရဲ့သောက်သုံးသော dosage- ပုံမှန်စတင်သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုနှင့်အသက်အရွယ်အရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါဆရာဝန်ကသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုပေါ် မူတည်. အဆိုပါသောက်သုံးသောအပေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ တိုင်းနှစ်ခုမှလေးပတ်ကြာများအတွက်ကြွက်သားသို့ 50-400mg ဆေးထိုးတဲ့သောက်သုံးသော။
သောက်သုံးသော, တစ်ဦးကဆရာဝန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပေါ် မူတည်. အဆိုပါသောက်သုံးသောတစ်ခုတိုးလာဘို့အကြံပေးဖြစ်နိုင်သည်ကုသမှုနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအသှေးကိုအဆင့်ဆင့်တုံ့ပြန် increases- ။
400 အများဆုံးသောက်သုံးသောသင့်ရဲ့ကြွက်သားသို့တိုင်းနှစ်ပတ်ဆေးထိုး MG ။
ပုံမှန်စတင်သောက်သုံးသော-အဆိုပါသင့်ကလေး၏သောက်သုံးသောရောဂါနှင့်၎င်းတို့၏အသက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဆိုပါဆရာဝန်ကသင်၏သူငယ်၏လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်. ဒီအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သောက်သုံးသောတစ်ဦး 50-400 တိုင်း 2-4 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်ကြွက်သားသို့ထိုး MG ရပါမည်။
သောက်သုံးသောတိုး-သင့်ကလေး၏သောက်သုံးသောသူတို့ရဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, ကုသမှုနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအသှေးကိုအဆင့်ဆင့်၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုသည်နှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
သင့်ကလေး၏ကြွက်သားသို့ထိုးသွင်းအများဆုံးသောက်သုံးသောတိုင်းနှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့အ 400mg ရပါမည်။
အမှု၌သင်တို့ကိုတစ်ပတ်ကိုဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏ 100-200 မီလီဂရမ်တစ်သောက်သုံးသောလုံလောက်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်အောင်မြင်ရန်ကြွက်သားတည်ဆောက်ဖို့ကအသုံးပြုနေသည်။ လေးပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာသင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းမှဓာတ်ပြုပြီးဘယ်လိုအဆိုအရ get ရလဒ်ပေါ် မူတည်. အဆိုပါသောက်သုံးသောတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
မှန်မှန်, testosterone ဟော်မုန်း cypionate လူတစ်ဦးကိုယူပြီးနိုင်သောအခြားအစတီရွိုက်၏ T-level ကိုကျဆင်းသက်ရောက်မှုတန်ပြန်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီအတှကျအသုံးပွုသောအခါ, testosterone Cypionate 200mg-400mg ဆေးထိုးဖြစ်ပါတယ်။
testosterone ဟော်မုန်း cypionate ၏သံသရာ
သငျသညျကိုယူပြီးစိတ်ဝင်စားလျှင် testosterone Cypionate ထိုး ဆီဥနှင့်အဆောက်အအုံကြွက်သားသွန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်သင်၏သံသရာဤကဲ့သို့သောဖြစ်သင့်:
Testosterone ဟော်မုန်းဓာတ်သတ္တုအပတ်သည် ၁ ပတ်မှ ၁၂ လအထိအပတ်စဉ် 200mg ဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်သင်သတိပြုသင့်သည်မှာသင်သည် Testosterone ဟော်မုန်းကိုအခြား steroid များနှင့်သိုလှောင်ထားပါကဆေးပမာဏပြောင်းလဲသွားသည်။ ဘာကြောင့်လဲ
တိုင်း Steroid တစ်မျိုးကွဲပြားခြားနားသောဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်။ သငျသညျအခြို့သော steroids သီးနှံများကိုပုံမှဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီကဒီစဉ်းစားရန်လိုပါတယ်။ တစ်ဦး stack သံသရာစတင်နေချိန်တွင်သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးထက်ပို Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမသိသောကြောင့်လည်း, သင်သတိထားရပါမည်။ ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပထမဦးဆုံးပေါ်တိုင်းပေးထား Steroid တစ်မျိုးစမ်းသပ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ သငျသညျလညျးထိုရှောင်ရှားပြီးတစ်ကြိမ် Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုနိုင်တယ်။
ဒါကကုထုံးဟာ steroids သူတို့ကိုယ်သူတို့ယူပြီးကဲ့သို့အရေးပါသည်။ testosterone Cypionate ၏အသုံးပြုမှုကိုအပြီး, ဒီဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုယခုဘယျလိုမှဖြစ်ပါသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။ သင် testosterone သံသရာနှင့်အတူပြုပြီးနောက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အီစရိုဂျင်နှင့်အတူလွှမ်းမိုးဖြစ်လာပေမည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အရှင်ဝှေးစေ့အနိုင်နိုင်ဆိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ယင်း၏ကိုယ်စား testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ဖို့ထိုးဆေးပေါ်မှီခိုထားပြီးလို့ပဲ။
testosterone cypionate သတိပေးချက်များ
ဒီဆေးကိုမသုံးမီ, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်အရာကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာရွေ့လူနာ hypercalcemia ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပေါ်လျှင်သင်ချက်ချင်းမူးယစ်ဆေးရဲ့အသုံးပြုမှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းသငျ့သညျ။
က peliosis hepatis, hepatocellular carcinoma နှင့် Hepatic adenomas တူသောအသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေမြင့်မားသောကြောင့်ဆေးများ၌ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါ။
သူကသေးအတည်ပြုခဲ့သည်သည်မဟုတ်သော်လည်းသူကဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်ဆီးကျိတ် hypertrophy ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်, သက်ကြီးရွယ်အိုများလူနာကဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏အသုံးပြုမှုကိုဆန့်ကျင်သတိပေးခဲ့သည်နေကြသည်။
testosterone Cypionate အစွန်းရောက်အသက်ရှုမဝြခင်း, ဖောနှင့်နာကျင်မှုများက symptomized စေခြင်းငှါအရာသွေးပြန်ကြော thromboembolic ဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဒီကနေဆငျးရဲခံရလျှင်, မူးယစ်ဆေးသုံးပြီးရပ်တန့်နှင့်သင့်လျော်စွာအခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။
ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားသူကလူတို့အဘို့, ကပြင်းထန်စိတ်ရောဂါနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖောဖြစ်ပေါ်စေသည်ကတည်းကကတည်ဆဲ Hepatic, ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာနှင့်နှလုံးရောဂါနှင့်အတူလူအသက်-ခြိမ်းခြောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Gynecomastia ကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။
တာရှညျခံအဖြစ်အသုံးပြုအဆိုပါ benzyl အရက်ဟာအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူ syndrome ရောဂါကဲ့သို့အလေးနက်ဆိုးကျိုးများစေပါတယ်။ အနိမ့်ပမာဏသာရှိသောကြောင့်သင်တို့ကိုမထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်နှောင့်နှေးအပျိုဖော်ဝင်ခဲ့တယ်သူကိုကျန်းမာယောက်ျားအဘို့အသေးငယ်တဲ့အမြင့်ရှိခြင်းကနေဆငျးရဲခံရပေမည်။ ဒါကြောင့်အရိုးရငျ့အပေါ်သက်ရောက်မှုလို့ပဲ။
testosterone Cypionate ထိုးရေရှည်ကုသမှုဖြစ်ကြပြီးနည်းမှန်လမ်းမှန်မယူလျှင်, ဒါကြောင့်, ပြင်းထန်သက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အမှု၌သင်တို့ကိုရုတ်တရက်မူးယစ်ဆေးတာကိုရပ်တန့်ဒါမှမဟုတ်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်မဆေးများတွင်ဖြစ်ပေါ်စေမည်မှာအားလုံးယူကြဘူး။ မူးယစ်ဆေးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ဘို့အကြောင်းပြချက်တခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပမာဏကိုအားလုံးအချိန်များတွင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ဤဆေးကိုယူမထားဘူးဆိုရင်, သင်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းရောဂါလက္ခဏာကိုခံရလိမ့်မည်။
သင်တစ်ဦးထိုးလက်လွတ်ဒါမှမဟုတ်အချိန်ဇယားအညီမူးယစ်ဆေးဝါးယူရန်ပျက်ကွက်လျှင်, ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်သို့မဟုတ်လုံးဝအလုပ်လုပ်ရပ်တန့်မပေးပေလိမ့်မည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအချို့ငွေပမာဏကိုအမြဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကလွဲချော်ထိုးအစားထိုးတဲ့လေလံအတွက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမယူသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာအလေးအနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်ကိုပဌနာခြင်းနှင့်သူ့ကိုသင် testosterone ဟော်မုန်း cypionate ထိုးသွင်းနောက်ဆုံးသောကာလကိုပြောပြရန်အကြံပြုပါသည်။ သူ / သူမသငျသညျသစ်တစ်ခုထိုးအချိန်ဇယားကိုအတူတက်လာကူညီပေးပါမည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် Testosterone ဟော်မုန်းအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ဤဆေးဝါးများ၏အန္တရာယ်များသောအဆင့်ကိုသင်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာများတွင်ပါဝင်နိုင်သည်
ကိစ္စတွင်သင် testosterone Cypionate ၏သိပ်ယူကြပြီသံသယသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဒေသခံအဆိပ်ထိန်းချုပ်မှုဗဟိုဌာနနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေစူးရှရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ချက်ချင်းအရေးပေါ်ခန်းသွားပါ။
သင်အပေါ်များမှာဆေးအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိသိရန်လိုပေမည် working- မူးယစ်ဆေးလျှင်သိရန်ကဘယ်လို။ သငျသညျအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်း၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချခဲ့ကြကြောင်းသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။
Testo Cypionate ၏ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
testosterone အပေါ်နေစဉ်အခြားပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်, သင်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့မထိုက်မတန်လျှင်သူသည်သင်တို့ကိုပြောပြနိုင်အောင်သင့်ဆရာဝန်စကားပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကသင်အမြဲဒီဆေးဝါးများ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရရန်သင့်ဆရာဝန်ကနေမေးမွနျးနိုငျသညျ။ သင်တစ်ဦး testosterone Cypionate ဆေးထိုးရတဲ့မတိုင်မီသင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်တယ်သောအရာတို့ကိုဘာတွေလဲ?
သင်ဤဆေးဝါးဒါမှမဟုတ်သင်ရှိခြင်းစေခြင်းငှါမဆိုဓာတ်မတည်မှမတည့်လျှင်ဆရာဝန်ကိုအသိပေးပါ။ ဒီ၏အရေးပါမှုကိုမူးယစ်ဆေးကိုသင်မတည့်ဖြစ်အံ့သောငှါအခြား active အစိတ်အပိုင်းများဆံ့စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျအတိတ်တွင်ဆီးချို, အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်, ကျယ်ဝန်းဆီးကျိတ်ကင်ဆာ (ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ, အမျိုးသားများတွင်ရင်သားကင်ဆာ), မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားမြင့်မားလက်စထရော, ကျောက်ကပ်ပြဿနာများ, အသည်းကနေခံစားခဲ့ရပါတယ်လျှင်ဆရာဝန်လည်းသင့်ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းဥပမာသတိထားရပါမည် အဆုတ်နှင့်ခြေထောက်အတွက်ပြဿနာများ, လေဖြတ်ခြင်း, (ဤကဲ့သို့သောနှလုံးတိုက်ခိုက်မှု, ရင်ဘတ်နာကျင်မှုနှင့်နှလုံးပျက်ကွက်ကဲ့သို့) နှလုံးရောဂါနှင့်သွေးခဲ။
သငျသညျဆီးချိုရောဂါရှိကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီမူးယစ်ဆေးသင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုလျှော့ချလိမ့်မယ်။ စိတ်ထဲအချို့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိသည်, သင်ညွှန်ကြားအဖြစ်မကြာခဏသင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်စစ်ဆေးနှင့်ဆရာဝန်ရလဒ်ကိုသိစေကြောင်းအာမခံပါသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောဉျြးဖဉျြးခွကေိုသို့မဟုတ်လက်များအဖြစ်အနိမ့်သွေးသကြားဓာတ်မဆိုနိမိတ်လက္ခဏာများသတိထားမိလြှငျ, မူးဝြေခင်း, မှုန်ဝါးသောရူပါရုံကို, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, နှလုံးခုန်မြန်, လှုပ်, ဒါမှမဟုတ်ရုတ်တရက်ချွေးချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြား။ ဒီတန်ပြန်ရန်သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏အစားအစာအပေါ်အပြောင်းအလဲများ, လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များနှင့်ဆီးချိုရောဂါဆေးဝါးစေလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် testosterone Cypionate သွေးကြော (Coronary သွေးလွှတ်ကြောရောဂါ) နှင့်နှလုံးပြဿနာများ၏အန္တရာယ်တိုးပွားလာထို့ကြောင့်သင့်လက်စထရောကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အလုံခြုံဆုံးအရာဆရာဝန်နီးကပ်စွာသင့်ရဲ့လက်စထရောအဆင့်ကိုစောင့်ကြည့်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျ testosterone Cypionate သုံးနေစဉ်အချိန်ကြာမြင့်စွာလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်အိပ်ရာ-စီးဖြစ်လာနိုင်ခြင်းလျှင်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်အသိပေးပါ။ ပြဿနာများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့, သင်မကြာခဏသင့်သွေးကယ်လစီယမ်အဆင့်ကိုစောငျ့ရှောကျသငျ့သညျ။ သငျသညျမကြာမီခွဲစိတ်ရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, သင်ယခုအချိန်တွင်သင်အသုံးပြုနေသောသမျှသောမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. သင်၏အသွားဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်, Non-ဆေးညွှန်းများနှင့်ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးများပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
သင့်ရဲ့အနညျးငယျတစျဦးအပျေါဒီမူးယစ်ဆေးကိုသုံးစွဲတဲ့အခါကသူငယ်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမြင့်ဟန့်တားအရိုးကြီးထွားအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သတိပြုဖို့လိုအများကြီးယူရပါမည်။ ကုသမှုစဉ်အတွင်း, သင်သည်သင်၏ကလေး၏အရိုးကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ထိုကဲ့သို့သောလက်နက်နှင့်ခြေထောက်ရောင်ရမ်းခြင်း, အသည်း / ဆီးကျိတ်ပြဿနာများကိုအဖြစ်က၎င်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့ကြောင့်အသက်ကြီးလူကြီးများအတွက်ဒီကုသမှုအပေါ်အခါသတိပြုရန်လည်းယူရပါမည်။
တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ပျက်ကျရှိခြင်း၏နာကျင်မှုများလွန်းသည်နှင့်ဤမူးယစ်ဆေးကတည်းကသင့်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, သင်မျှော်မှန်လျှင်ကနေဝေးနေအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးအပေါ်နေချိန်မှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ရှောင်ရှားရန်ထိုကဲ့သို့သောပဋိသန္ဓေတားဆေးဒါမှမဟုတ်ကွန်ဒုံးအဖြစ်မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရသောပုံစံများ အသုံးပြု. စဉ်းစားပါ။ အဘယ်အရာကိုကမတော်တဆဖြစ်ပျက်ဆိုရငျကော သင်၏ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းအကြောင်းသိပါစေ။
ဒီဆေးကရင်သားနို့ရှောက်သွားနိုင်လျှင်သေးအတည်ပြုခဲ့သည်မပေးပါ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အရှင်တစ်ဦးသူနာပြုမွေးကင်းစမှအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့နို့ထုတ်လုပ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။ နို့နေစဉ်မည်သည့်အန္တရာယ်မှရှောင်ရှားရန်, ဒီမူးယစ်ဆေးကိုမသုံးကြဘူး။ သင်တို့သည်လည်းနို့တိုက်မတိုင်မီဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့အကြံပေးချက်ကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
testosterone Cypionate ထိုးသွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
self-ဆေးထိုးခက်ခဲတဲ့တာဝန်ကဲ့သို့မြည်နိုင်ပေမယ့်သင်ကပြုမိရဲ့ပုံကိုနားလည်တခါ, သင်ကမည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်ရကျိုးနပ်သည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။ ယခုအားဖြင့်သင့်ကိုယ်သင်မေးမွစေခြင်းငှါ, ငါရှိရာ start သလဲ? , အေးဆေးတည်ငြိမ် Be နှေးကွေးနှင့်အသက်ရှူဤတွင်ဘာလုပ်ရမှန်းဖြစ်ပါတယ်။ :
သင်တစ်ဦးဆေးထိုးမပေးခင်ကဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောရှိသည်သော testosterone Cypionate- ကောင်တာစစ်ဆေးမှုများ၏ညာဘက်သောက်သုံးသောရှိသည်အာမခံပါသည်။
တစ်မြုံ, သင့်လျော်သောဆေးထိုးအပ်ကိုရယူပါနှင့် testosterone Cypionate ဆေးထိုးရရန် syringe-; ဒါကြောင့်သင်ကအတိတ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေတစ်မြုံအပ်အသုံးပြုအကြံပြုသည်။ အမြဲတမ်းသန့်ရှင်းအချိန်မရွေးသင်တစ်ဦးဆေးထိုးရှိသည်ဖို့လိုခငျြအဖြစ်သို့ပေးကြောင်းတဦးတည်းကိုအသုံးပြုပါ။ သငျသညျ testosterone Cypionate အတော်လေးအဆီပြန်နှင့် viscous သည်နှင့်သင်, ဒါကြောင့်, မူးယစ်ဆေးကိုတက်ဆွဲရန်ထူဆေးထိုးအပ်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်သင်သိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထူသောတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကဒီကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒါနာကျင်ပါ၏ သငျသညျဆေးထိုးပေးရန်၎င်း၏အချိန်တစ်ချိန်ကပိုမိုပါးလွှာတဦးတည်းအတူကအစားထိုးရန်နိုင်ပါတယ်။ အပ်သို့မဟုတ်ပြွတ်ပေါက်ကိုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်မရှိတော့မြုံဖြစ်ပြီးသင်ကလွှင့်ပစ်ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမ option ကိုရတယ်သတိပြုပါ။
တစ်ဦးကနှံ့နှံ့စပ်စပ်လက်သန့်ရှင်းရေး gloves- နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သင်၏လက်ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်မြုံပေါ်တွင်တင်ရောဂါကူးစက်မှုကနေသင်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်, သင်၏လက်အိတ် sanitized ကြသည်မဟုတ်ဆိုတ္ထုသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်များနှင့်အဆက်အသွယ်သို့လာလျှင်, သင်သည်ထိုသူတို့နေရာတွင်အစားထိုးသင့်ပါတယ်။
အတွင်းပိုင်းလေဖိအားမြှင့်ရန်အပုလင်းသို့ဤ Injection လေကြောင်းလုပ်ဖို့ညာဘက် dose- တက်ဆွဲပါ။ ဒီအားသာချက်ကိုသင်လျင်မြန်စွာယင်း၏အထူပေမယ့်ဒီမူးယစ်ဆေးဆွဲနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဇောက်ထိုးပုလင်းကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်သင်လိုအပ်ကြောင်းဆေးဝါးများ၏အတိအကျသောက်သုံးသောရနိုင်သည်။
အခုတော့တစ်ဦးသေးငယ်အပ်-ရှိပါတယ်သင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနည်းနည်းနာကျင်မှု့မရှိတာအောင်ပြုနိုင်သည်တစ်ခုခုရှိသည့်အခါအစွန်းရောက်နာကျင်မှုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်အောက်ခံရန်မလိုအပ်မယ့်သို့ပြောင်းပါ။ သငျသညျဤအမှုကိုအဖြစ်ဆေးဖိတ်မထားဘူးဆိုတာသေချာစေရန်, အချို့သောလေကြောင်းဆွဲကဖယ်ရှား, အပ် Point-တက်ကိုင်လော့။ အဆိုပါလက်အိတ်လက်ကိုသုံးပါနှင့်တစ်ဦးပိုမိုပါးလွှာတဦးတည်းနှင့်အတူအစားထိုးလိုက်ပါ။ ဒါဟာအစမြုံနှင့်အသုံးမပြုဖြစ်ရပါမည်။
အဆိုပါပြွတ်-သည့်အခါကဆေးထိုးဖို့လာ, ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ရရှိသွားတဲ့ဆိုလေကြောင်းပူဖောင်းတစ်ဦးပြင်းထန်ပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း Aspirate ။ ဒီလိုဖြစ်တော်မမူကြောင်းသေချာစေရန်, သင် aspirate ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါ uncapped အပ်အတူတက်ညွှန်ပြသည့်ပြွတ်ကိုင်သည်။ အဆိုပါပြွတ်အပေါ်ဖြစ်မည်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာလေကြောင်းပူဖောင်းများအတွက်ဂရုတစိုက်ကြည့်ပါ။ သူတို့ကိုထိပ်ရွှေ့ဖြစ်စေခြင်းငှါအခြမ်းကနေတောက်။ သင်မူးယစ်ဆေးပူဖောင်းအခမဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်ပြီးတာနဲ့လေထဲမှာထွက်အတင်း။ ကအားလုံးကိုထွက်သည်ကိုသိမှတ်စေခြင်းငှါ, ပြွတ်ရဲ့အစွန်အဖျားမှထွက်လာမှဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတစ်စက်ဘို့စောင့်ပါ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖိတ်ရှောင်ရှားရန်ဤသို့ပြုလာသောအခါသတိကိုယူပါ။
ဆေးထိုး site ကို-ဒီဆေးထိုးထိပ်အပြင်ဘက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်ပေါင်၏အထက်နောက်ကျောဒေသအပေါ်ပေးထားရပါမည်ပြင်ဆင်ပါ။ ဤဆေးထိုးထိုးသွင်းနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောဒေသများမဟုတ်, သူတို့က commonest ဖြစ်ကြသည်။ ထိုဒေသတွင်သုတ်ဖို့မြုံအရက်ကိုသုံးပါ။ ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်, ဘက်တီးရီးယားသင့်ရဲ့အရေပြားပေါ်တွင်နေရာမရှိရတယ်, အဲဒါကလည်းရောဂါကူးစက်မှုကာကွယ်ပေးသည်။ သွေးကြောသို့မဟုတ်အာရုံကြောနာကျင်ရှောင်ရှားရန်, glute ၏ထိပ်အပြင်ဘက်အပိုင်းပေါ်ကြောင်းဆေးထိုး site ကိုရွေးချယ်ပါ။
testosterone ထိုးသွင်းဖို့ဘယ်လိုအံ့ Inject-? အဆိုပါပိုးသန့်ဆေးထိုးဧရိယာအထက်မူးယစ်ဆေး 90 ဒီဂရီများပြွတ်ကိုင်ထားပါ။ လျင်မြန်စွာအတွက်တွန်းအားပေးခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ကထွက်ဆွဲပါ။ ကိစ္စတွင်သင်သွေးကြောထိခိုက်စေပါဘူးဆိုလိုသည်သောပြွတ်အတွင်း၌မည်သည့်အသှေးကိုသတိထားမိ။ အခြားသင့်လျော်သောဧရိယာ Get နှင့်တဖြည်းဖြည်းမူးယစ်ဆေးထိုးသွင်း။ နာကျင်မှုကြောင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းဆရာဝန်တစ်ဦးကိုဆက်သွယ်အစွန်းရောက်လျှင်အနည်းငယ်အဆင်မပြေသို့မဟုတ်နာကျင်မှု Feeling ပုံမှန်ပေမယ့်။
သင်အပ်ဆွဲထုတ်တော့တခါထိုးဧရိယာ၏ဂရုစိုက်ပါ။ ထိထိရောက်ရောက်ဒီလိုလုပ်ဖို့အပ်မယ့် entry ကိုအမှတ်စစ်ဆေးသည်နှင့်စင်ကြယ်ဝါဂွမ်းဘောလုံးကိုထားပါ။ စနစ်တကျအပေါငျးတို့သအသုံးပြုသောတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်နှင့်ဆေးထိုးပိုက်များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ သင်သည်မည်သည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောရောင်ရမ်းခြင်း, နီခြင်းသို့မဟုတ်အဆင်မပြေတွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, ချက်ချင်းဆေးသမားကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဘယ္လို သိုလှောင်ခြင်း testosterone Cypionate
testosterone Cypionate ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 20 မှ 25 မှာသိမ်းဆည်းထားရပါမည်။ ဒါ့အပြင်အလင်း, အစိုဓာတ်နှင့်အပူကနေကွာထားပါ။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုအဆိပ်သင့်စေကာကွယ်တားဆီးဖို့ဝေးကလေးတွေထဲကနေအားလုံးဆေးထားပါ။ မူးယစ်ဆေးကုန်ဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်လျော်စွာပစ်လော့။ ဒီဆေးကဆင်း flushing သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေခြင်းငှါအဖြစ်စုပ်ချလောင်းရှောင်ကြဉ်ပါ။
စတီရွိုက်အမှုန့်တို့က testosterone Cypionate စေရန်ချက်ပြုတ်နည်း
testosterone Cypionate အောင်ကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား? ဤဟင်းချက်နည်းများသင်လိုအပ်သင်သည်အဘယ်သို့ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
1. Cypionate 5gram ပြောင်းလဲမှုကို 20ml သို့ 250mg / ml ဖြင့်စမ်းသပ်ပါ
စမ်းသပ်မှု cyp ၏ 5gm
1% BA ဘွဲ့နဲ့တန်းတူဖြစ်သော Benzyl အရက်၏ 5ml
နှမ်းဆီ 25 ml
3cc,5/ 10 cc ဆေးထိုးပိုက်
18 / 20 gauge တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်
Whatman မြုံ filter ကို
အဆိုပါအမှုန့်၏5ဂရမ်အလေးချိန်
အဆိုပါဖလားကိုဖို့ BA ဘွဲ့ Add
မီးဖိုအတွက်ရေနံချထားပါကအပူ။ ဒါဟာပိုးမွှားသတ်ကူညီပေးသည်။ သငျသညျဒယ်အိုးထဲကအလုံအလောက်ရနိုင်သောကြောင့်သင်လိုအပ်ထက်ပိုပြီးအပူ။
အဆိုပါဖလားကိုသို့ရေနံ Add နောက်ပိုင်းတွင်ဘို့ 2ml သိမ်းဆည်းပါ။ ညင်ညင်သာသာဘူးကိုလှုပ်ခါ။
အဆိုပါ 18 သို့မဟုတ် 20 gauge အပ်ကိုယူနှင့်မြုံဖလားကိုထဲမှာထားပါ။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ Whatman မြုံ filter ကို attach ။
တစ်ပြွတ်အသုံးပြုခြင်းဖြေရှင်းချက်ထုတ်ဆွဲနှင့် Whatman filter ကိုကနေတဆင့်ကို run ။
အခြားပြွတ်၌ပါသောဆီ 2ml ယူ. ဖြေရှင်းချက်သို့ Whatman ကို run ။
2. 10mg / ml မှာ test Cypionate 40 ဂရမ်ပြောင်းလဲခြင်း 250 ml
နှမ်းဆီ5ml
Benzyl အရက် = 2% BA ဘွဲ့များ 5ml
စမ်းသပ်မှု cyp ၏ 10 ဂရမ်
3cc နှင့်5/ 10cc ဆေးထိုးပိုက်
3. ml နှုန်း 60mg မှာ 250ml
8% BA ဘွဲ့များ5ml
grapeseed ဆီ7milliliter
စမ်းသပ်ခြင်း Cypionate Powder ၏ 15 ဂရမ်
4. ml နှုန်း 250mg မှာ 80 ml
grapeseed ဆီ 185 ml
Benzyl Benzoate ၏ 45mls
Benzyl အရက်၏ 5ml
testosterone Cyp Powder ၏ 20 ဂရမ်
ml နှုန်း 250mg မှာ 200 ml
Benzyl Benzoate ၏ 45 ml
testosterone cyp Powder ၏ 50g
5. ml နှုန်း 100mg မှာ 250ml
စပျစ်သီးအမြိုးအနှယျဆီ 25 ml
18 ml ကို Benzyl Benzoate
Benzyl အရက်၏ 2ml
75g testosterone cyp Powder ၏ 25 ml
ကုန်ကြမ်း Steroid တစ်မျိုးမှုန်ကနေချော testosterone Cypionate အောင်လုပ်နည်း
သငျသညျ steroids ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဝယ်ယူထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်အချော testosterone သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ဘယ်လို testosterone ဟော်မုန်း Cypionate အမှုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါသင်တို့ကိုသွန်သင်မည်။
100 တစ်ခုချင်းစီ milliliter ml နှုန်း MG ဖြေရှင်းချက်များပါဝင်သည်:
testosterone Cypionate မှုန့် 100 မီလီဂရမ်
Benzyl benzoate ၏ 1 milliliter
လဲမှို့အမြိုးအနှယျဆီ 736 မီလီဂရမ်
Benzyl အရက်၏ 45 မီလီဂရမ်
တစ်ဦးကမြုံပြွတ် filter ကို 22um
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းလိုအပ် testosterone Cypionate အလေးချိန်နှင့်ဖန်ခွက် beaker သို့ထားပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ Benzyl Benzoate နှင့် Benzyl အရက်ချက်ထည့်ပါ။
အဆိုပါအရည်အတွက်အမှုန့်တခါထဲဖျက်သိမ်းရေးကိုစတင်ရန်သင်မူကားထိုလုပ်ငန်းစဉ်အရှိန်မြှင့်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်ကရေရေချိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒယ်အိုးသို့မဟုတ်အခြားသင့်လျော်ရာအရပျထဲမှာရေအနည်းငယ်သို့ဖလားကိုချထားပါ။ အချို့သောထုတ်ကုန် oxidise စခွေငျးငှါဖြစ်သောကြောင့်လည်းရေပူကိုမသုံးပါနဲ့။ သငျသညျအဖြေနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်ထို့နောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကရေနံများလွန်းနွေးရပါမည်ဒါမှသင်အသုံးပြုရည်ရွယ်အဆိုပါလေယာဉ်တင်သင်္ဘောရေနံဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အလားတူအပူချိန်၏ဖြစ်သင့်သည်။ ဤသို့ပြု၏အကြောင်းပြချက်အပေါငျးတို့သမှုန့်ဟာအရည်ထဲသို့ပျော်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာကျန်ရစ်ခြင်းမရှိမြင်နိုင်မှုန့်ရှိကွောငျးအာမခံပါသည်။
ဖြေရှင်းချက်သို့နွေးဝါဂွမ်းအမျိုးအနွယ်ကိုရေနံကိုယူပါ။ စနစ်တကျရောထွေးနှင့်မျှမဟော်မုန်း swirls ကြောင့်ဖြစ်ပျက်သည်မှန်လျှင်, သွားရေရေချိုးထံမှဖြေရှင်းချက်ကိုယူနှင့် filtering ကို process ကိုကရရှိပါတယ်အာမခံပါသည်။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းသင်နှင့်အတူ filter မှသုံးပါလိမ့်မယ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုတက်ဆွဲရန်ပြွတ်အသုံးပြုနေသည်။ သင့်အနေဖြင့်ကြီးမားတစ်ချိန်ကပြွတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သေးငယ်ပြွတ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါ 0.22 အွမ်မြုံပြွတ် filter ကိုအထုပ်နှင့်အငယျဆုံးသောဘေးထွက်သို့အစိမ်းရောင်အပ်တွန်းနှင့်အပြွတ်အပေါ်ထားတော်မူ၏။
အဆိုပါမြုံဖလားကို၏အထက်ပိုင်းသုတ်ဖို့အရက် swab ကိုအသုံးပြုပါ။ အထဲတွင်အစိမ်းရောင်ဆေးထိုးအပ်ကိုထည့်သွင်းပါနှင့်ဖလားကိုသို့ပြွတ် filter ကိုအပေါ်ချိတ်ဆက်အပ်ထားပါ။
တစ်ခါတလေသင် filter ကိုပိတ်ဆို့ရစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးစေခြင်းငှါထွက်ရှာတွေ့လိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအချိန်ကုန်သက်သာစေရန်အခြားတစ်ဦးနှင့်အတူ filter ကိုတစ်ဦးကိုအစားထိုးစေနိုင်သည်။ သင်အသုံးပြုကြောင်း Steroid တစ်မျိုးအမှုန့်အမျိုးအစားနှင့်ပမာဏကိုလုပ်ငန်းစဉ်ကြာသောအခြိနျကာလ၏ပမာဏဆုံးဖြတ်သည်အရာဖြစ်တယ်။
သင်မြုံဖလားကိုအတွက်ထုတ်ကုန် filter ပြီးနောက်ထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
testosterone Cypionate ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သင် testosterone Cypionate ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားသိဖူးသလော ဤသည်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်နှင့်သင်သေးသငျ့စိတျထားကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်, သင်အောက်ပါပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ရှုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
ယွမ်ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဒီဆေးကိုစတင်ခဲ့ကတည်းကငါအားကစားရုံအတွင်းသိသိသာသာအကျိုးအမြတ်သတိပြုမိကြပါပြီ "ဟုဆိုသည်။ အကြှနျုပျ၏ ABS ပိုပြီးမြင်သာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤငါ့ကို "ဟုအဆိုပါအားကစားရုံ ပို. ပင်ကိုချစ်တော်မူပြီ။
Li ကသူတာယာအားကစားရုံသွားဘယ်တော့မှကပြောပါတယ်။ သူကခွေးကိုငြီးငွေ့ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းအဘို့အသွားနိုင်သည်။ နေ့တိုင်းအလုပ်ပြီးနောက်သူသည်အားကစားရုံသွားသူကဲ့သို့ခံစားရဘယ်အချိန်မဆိုအစွန်းရောက်အလုပ်ထုတ်ပါဘူး။
Chen ကဆရာဝန်ကသတ်မှတ်ထားသောကတည်းကတိုင်းနှစ်ပတ်အတွင်း MG 200 ထိုးသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူကဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်မကြွက်သားရရှိမှုနှင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးအတွက်ညာဘက်လမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကို "လို့ပြောပါတယ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးကိုကျေးဇူးတင်, ငါသည်ယခု "လူယောက်ျားကဲ့သို့ခံစားရသည်။
testosterone Cypionate စျေးနှုန်း
အခုဆိုရင်သင်ဤထုတ်ကုန်သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုသိသော, သင် testosterone Cypionate စျေးနှုန်းကိုသိရန်လိုပေမည်။ ဒီတော့ testosterone Cypionate ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, ဒါဟာသင်လိုချင်အရေအတွက်နှင့်သင့်သောက်သုံးသောပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဒါဟာအစတည်နေရာပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောစတိုးဆိုင်များအပေါ်ကွဲပြားလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်း testosterone Cypionate ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
သင်တစ်ဦး mouse ကို၏ကလစ်မှတဆင့် testosterone Cypionate ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါဟာအဆင်ပြေအပါအဝင်မြောက်မြားစွာအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့လာပါတယ်။ ဤတွင်ဘာလုပ်ရမှန်းဖြစ်၏
ဟူသောဝေါဟာရကိုရှာရန် "testosterone ဟော်မုန်း cypionate ။ "
သင်ကကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူရန်သင့်ရထိုက်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ရန်တိုတောင်းတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာကိုဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်ခံရပေလိမ့်မည်။ သငျသညျမွနျမွနျထဲမှာဖြည့်ပါနှင့်တင်ပြနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကုထို့နောက်ကြောင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့အမိန့်ကိုလက်ခံပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့အခုသင်အရှိဆုံးအဆင်ပြေနည်းလမ်းများ အသုံးပြု. ငွေပေးချေမှုစေနိုင်ပြီး, ကပြီးပြည့်စုံမယ့်တစ်ချိန်ကယင်းကုန်ပစ္စည်းများချက်ချင်းထွက်စလှေတျတျောနေကြသည်။ သင့်တည်နေရာထုတ်ကုန်အကူးအပြောင်းအပေါ်ဖွစျလိမျ့မညျအချိန်ပမာဏကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏ကာယဗလခရီးအတွက်အပြောင်းအလဲလုပ်လိုလျှင်နျ, ဤအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးကျေးဇူးများ uncountable များမှာကတည်းကသင်ဤလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းနောင်တဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပြီးသားအဘယ်သူ၏အာဏာကိုဈေးကွက်ထဲမှာပြိုင်ဘက်ကင်းဖြစ်ပါတယ်တယောကျကိုတှေ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုသင်အခြား Steroid တစ်မျိုးရှာနေကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အဆီသိုလှောင်စရာမလိုဘဲသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုစားနိုင်သည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ပြောင်းလဲသွားပြီးသင်၏အကောင်းဆုံးကိုယ်ခန္ဓာထုထည်ကိုရရှိလိမ့်မည်။ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသောကိုယ်ခန္ဓာရရန်သင်အနည်းငယ်လေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ဦးငွီးငှေ့ဖှယျယလေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်သင်၏အရေးပေါ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီထုတ်ကုန်နိုက်ထရိုဂျင်ပြိုကွဲခြင်းနှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်ပေါင်းစပ်တိုးပွါးစေလို့ပဲ။ ဒါ့အပြင်သင်ပိုမိုလှုံ့ဆျောမှုရလိမ့်မယ်, ဤသင်တို့အဘို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်လျှင်, သင်ယခုသင့်လေ့ကျင့်ရေးကိုထပ်-start ကန်ဖို့အားလုံးကို psyche ရှိနိုင်ပါသည်။
testosterone Cypionate သင်ပိုမိုချောမောစေရန်ကတိမပေးပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကသင်ကိုပိုပြီးဆုတံဆိပ်နှင့်ဆုဖလားအနိုင်ရကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုခန္ဓာကိုယ်ရည်မှန်းချက်များပြီးမြောက်ကူညီပေးပါမည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတှငျကြှနျုပျတို့အမျိုးမျိုးသောလယ်ကွင်းထဲကနေခြွင်းချက်ကလူငှား။ အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လေ့ကျင့်ရေး, သူတို့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်မှကားအဘယ်သို့နေကြရှိသည်သောစိတ်ကူးစွမ်းဆောင်ရည်။ တစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကျနော်တို့မကြာခဏလေ့ကျင့်ရေးကတဆင့်သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းမိမိတို့၏စိတ်ဓာတ်, ကတိကဝတ်များနှင့်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်လုံလောက်သော tools များနှင့်အတူသူတို့ကိုပေး။
ကျနော်တို့ကအလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းမှာအရည်အသွေးကောင်းထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်စင်ကြယ်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်သည်သူတို့၏ထိရောက်မှု unbeaten ကြောင်းကိုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာငါတို့ရှိသမျှသည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းကြှနျုပျတို့ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကျေနပ်ကြောင်းထုတ်ကုန်များကိုသေချာစေရန်အားလုံးစည်းမျဉ်းများနှင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများကိုလိုက်နာ။
ကျနော်တို့ဆောင်ရွက်ရန်လှုပ်ရှားမှုများကိုအနုတ်လက္ခဏာကမထိခိုက်ပါဘူးသေချာအောင်နေဖြင့်သန့်ရှင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ရှောက်ရန်တိုင်းတစ်ခုတည်းအားထုတ်မှုပါစေ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောရိုးဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအလွန်တုံ့ပြန်မှုသည် client ကိုနားထောငျ။ အခြားအဝန်ဆောင်မှုပေးကနေကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားကြောင်းနောက်ထပ်အရာကျနော်တို့အလေးအနက်ထားဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်ယူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးတိုင်ကြားချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထောက်ခံချက် Be; သင့်ရဲ့စကားသံကိုအမြဲကြိုဆိုသည်။
ကက်နက် L. Becker ကစာမျက်နှာ 1189-1893 တည်းဖြတ်ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်နှင့်ဇီဝြဖစ်၏အခြေခံမူများနှင့်အလေ့အကျင့်,
testosterone: အီး Nieschlag, HM Behre 272-317 တည်းဖြတ်လှုပ်ရှားမှု, Deficiency, လူစားထိုး,
ရှောလမုန် Melmed, ဖြစ်သူ Kenneth S. Polonsky, P. ရိဒ် Larsen, ဟင်နရီအမ် Kronenberg, စာမျက်နှာ 758-766 အားဖြင့်ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ Williams ဟာဖတ်စာအုပ်,
13465 Views စာ
Sunifiram ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး) DMAA မစတင်မီသင်သိထားသင့်သည့်အရာ (၁၀) ခု